बालश्रम | मझेरी डट कम
“यसका अतिरिक्त हामीले बालश्रम कति उपयोग गरेका छौ भनेर विश्वले हामीहरुलाई हेरिरहेको पनि छ । हामीले अन्तरराष्ट्रिय इज्जत पनि गुमाइरहेका छौ । हाम्रो देशले उत्पादन गर्ने वस्तुमा बालश्रम प्रयोग भएको पाएर हाम्रो उत्पादन नै उनीहरुले बहिष्कार गरिरहेका छन् । अँझ पनि हामीले चेतेका छैनौ ।”
"हो नि ।"
होलीका दिन बेलुकातिरको कुरा हो । साथीसाथीहरू थिए धनवीर र रामदयाल । उनीहरू साँझको बेलामा यसो सेन्टेरमको सुर्को लगाएर होली मनाउने सुरसारमा थिए । यसैले फुर्सदको बेलामा कुरा गरिरहेका थिए ।
“ए धनवीर के कुरा मात्र गरिरहनु ? कि केही यसो बन्दोबस्त पनि गर्ने हँ ?” रामदयालले यसै बीचमा सोधे ।
“हो तिमीले अब सम्झायौ । म पनि कुरा गर्न थालेपछि भुलिहाल्छु । ए कनेरिया कता मर्यो यो । अहिलेसम्म पनि होली खेल्नु पर्ने यसलाई ?” कराए धनवीर ।
यसै बेला एक दस बार वर्षको केटो देखियो उनीहरुका अघि । उसका एक हातमा पानीले भरिएको बोतल थियो अर्को हातमा दुइटा गिलास थिए । गालीले डराएर उसका हातबाट एक गिलास भैमा खसेर चकनाचुर भयो ।
“फटाहा बदमास, लु हेर काम गरेको यसले !! नालायकले सत्यानास गर्यो । अब यसको तलबबाट नअसुली ता कहाँ छोड्छु र !!” कराए धनवीर ।
“दिउसो भरि खेल्नु छ पेट भरि खानु छ । मातिएर खपिसक्नु छैन । लु अब के हेरिरहेको । यो सबै फुटेको गिलासका टुक्रो उठा । अनि अर्को गिलास लिएर आइज । छिटो काम गर् नत्र खालास् चुटाइ ।”
“भैगो तिमी बढी नकराऊ न । यस्ताहरुसँग मुख लाग्नु हुन्न । तलबबाट काट्नु नि ।” रामदयालले भन्यो ।
“होस् यो सबै कुरा । बरु अलिक चाँडो केही लिन पाए हुने थियो । म पनि तिमीलाई बेर्थैमा कुराइरहेको छु !” धनवीरले भन्यो ।
एकै छिनमा केटाले फेरि अर्को गिलास ल्यायो । गिलास भरिए । गिलास मुखतिर घोप्टिन थाले । दुवै जना खानपिनमा मस्त हुन थाले अनि यो बालश्रमकै बारेमा गम्भीर बहस पनि जारिराखे ।
बालक भने उनीहरुको खानपानमा कतै कमी पो हुने हो कि भनेर सतर्क हुँदै कहिले के कहिले के ल्याएर टक्रयाइरहेको थियो । बेला बेला बाहिर सडकमा ऊ सरहका केटाकेटीहरुले रङ्ग खेलेर उफ्रिरहेको दृश्य हेर्न चाहेर पनि हेर्न पाइरहेको थिएन ।
खै त कहाँ गयो फेरि हाम्रो संविधान
आवाज, नदी र म
सधैं नयाँ सपनी आउँछन्